Peji peji • Modelling Nyika
———- MAPEJI ———-
Mamiriro ekunze emamiriro ekunze
Workshop: ine modhi kubva kuA kusvika Z
Miedzo uye mharidzo
Garari yemabasa akapedzwa
DIY: DIY Muenzaniso Kugadzira
BLOG: KUENZANISA KUBVA MUMASANGANO
Chikamu cheBlog: modelling zvidzidzo, dzidziso, magwara, zvinonakidza chokwadi.
CHITSAUKO CHOKUDZIDZA: MAPODZIDZO MAPODZERO EPASI
Chitoro chevatengesi nechipo chedu che brand: zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvevatambi.
Rondedzero yezvitoro zvepamutemo uye vekutengesa zvizere neModellers World vanopa
Kuita kuti zvive nyore kufamba nebhulogi, zvinyorwa pairi zvakarongedzwa maererano nemabhuroko anotevera:
Mharidzo yehunyanzvi hunyanzvi uye maronda ekupfeka pane iyo modhi. Kushanda nemuenzaniso kubva padanho rekuonekwa kwetoyi kusvika pakuumba kunyepedzera kwechokwadi.
Zvese nezve zvekutanga modhi basa. Nezve kubatika, kugadzirisa uye kupenda, zvinoenderana neyedu maxim: modhi inogadzira kubva pakutanga.
Hukama hwebasa pamwe neiyo modhi kubva kune yekutanga kutemwa kusvika kune yekupedzisira gallery.
Chikamu cheBlog chakapihwa modelling misoro: makoramu, mishumo, mabvunzurudzo. Mishumo kubva ku Modelling zviitiko. Zvishoma nezvemauto.
Mharidzo yemabhokisi isati yanamwa, kuyedzwa kwemakemikari uye modelling accessories. Izvo zvatinoisa maoko edu pamusoro, zvakanangana uye kusvika padanho.
Makamuri ekupedzisira emapurojekiti akapera. Ese mamodheru andakashanda paari uye akapedzwa zvinobudirira ane nzvimbo muchikamu chino.
Chii chitsva mu Modelarski World. Zvese nezve izvo zviri kuchinja uye kuitika pamapeji ewebsite, asi zvakare nezve nhau uye mushambadziro zviziviso.
Muchikamu chino, tinopa zvishandiso zvakagadzirwa pamba, magajeti uye zvishandiso zvinobatsira kune vanoteedzera uye vanofarira DIY.
Dzazvino blog zvinyorwa
Chii chatiri kunyora nezvacho parizvino, zvatiri kushanda pairi:
Mafuta Akasviba Wash 'ami acc. tenzi Mirek Serba
mafuta Wash izvi ndizvo zvigadzirwa zvedu zvatinonyanya kudada nazvo. Ndiani Mirosław Serba pane yePolish modelling chiitiko, hapana chikonzero chekutsanangura. Murume ane tarenda guru, muoni wekuenzanisira, uye mugadziri ane hombe [...]
Ongorora kubva kuGrot Kurongeka
Ndinokutendai kumunyori uye tinokukokai kuti mumutevere munhau: PAYPAL ME: https://paypal.me/Zigmunth PATRONITE: https://patronite.pl/GrotOrderly SKLEPIK CUPSELL: http: //grotorderly.cupsell. pl / DISCORD LINK: https://discord.gg/jxzq2rx PEJI PANE FACEBOOK: http://www.facebook.com/GrotOrderly BLOG ON BLOGSPOT: http://www.grotorderly.pl
Iyo bhaisikopo idzva pane Agtom chiteshi
Nhasi, pakati pehusiku, imwe vhidhiyo pane Agtom chiteshi yakabhururuka ichibva mukuvakwa kwetangi 7TP - IBG 1:35, nhau kubva kudanga reBG. Tomek akapa hunyanzvi hwekushandisa pendi wash bhurasho remhepo. Ndatenda nekusarudza [...]
ONA ZVINHU ZVESE PABlog
Zvinyorwa zvinonyanya kufarirwa
Tarisa uone zvatakanyoreswa nevanyori vedu pawebhusaiti yedu:
Kuisa pigments kune mamodheru
Nzira yekugadzira upholstery pane modhi Maitiro ekugadzira upholstery pane modhi
chipanji upholstery maitiro - akapusa uye anoshanda!
Varongi vemusangano kubva kuHobbyZone
kukosha kwayo, haina kukosha here? - Ongorora
Ngura pane iyo isina kugadzikana
maitiro ekukurumidza uye nyore nyore kuzadzisa zvinonakidza pamuenzaniso
Iwe une Facebook account here? Joinha boka redu Modeling uye Weathering mafeni!
Kuva munharaunda iri mukana wakanaka wekuzviratidza iwe, kutsvaga kurudziro uye kutsvaga mazano. Ita modelling shamwari, tevera uyejoinha hurukuro. Rangarira, ani naani asingabvunze mibvunzo haawane ruzivo. Isuwo tinoronga makwikwi ecyclical nemubairo uye neWorld Modeling Cup Championships muboka.
Hezvino izvo zvavanotaura nezvedu:
Ini zvechokwadi ndinorikurudzira. Chikamu chebasa rakanaka, zano rehunyanzvi, zvirongwa zvekuvaka uye maberere akanaka padanho rega rekufananidzira kufambira mberi.
Opinion kubva kuFacebook
Zvakanakisa muPL! Webhusaiti, shopu, yakanaka kwazvo kupihwa. Ndinokurudzira kujoina boka, tsika dzakakwirira.
Boka rakakura uye rinonakidza rine mazano anonakidza kwazvo
Mashoko mashoma pamusoro pemunyori
Kugadzira mamodheru ibasa rakandipedza kubva pahudiki hwangu. Ini ndinogara ndichivandudza kushuva kwangu, izvo zvakapa kusimudzira kune Modelarski World: nyika yandinogona kusanganisa chandinofarira nehupenyu hwangu hwehunyanzvi. Iko kunaka kuri kwekutanga uye zvikonzero zviri kunze kwemubvunzo.
Muridzi weModelarski Świat Kambani
Zvimwe pamusoro pekambani
Isu tinoshanda 09-17 mu UTC + 01: 00 / UTC +02: 00 nguva yenguva
Zvekuvanzika & maKuki: Ino saiti inoshandisa makuki. Nokuramba uchishandisa ino webhusaiti, unobvumirana nekushandisa kwavo.
Kubatana kwepasi rese
Tumira e-mail kukero inotevera:
Yedu Fanpage Fb
© 2022 Modeling Nyika. Yakavakwa uchishandisa WordPress uye iyo Musoro weMesmerize